Sonic Robo Blast 2, lalao hazakazaka kart misy lohahevitra Sonic | Ubunlog
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery Sonic Robo Blast 2 Kart isika (matetika nohafohezina ho SRB2Kart na SRB2K). Ity dia lalao hazakazaka kart miaraka amin'ny tarehin-tsoratra Sonic, singa ary hazakazaka misy lohahevitra Sonic. Ny SRB2Kart dia manana sarintany mihoatra ny 100 amin'ny maodin-dalao roa: ny maody hazakazaka lehibe ary ny maody ady izay ifamelezan'ny mpilalao amin'ny fampiasana ireo singa misy.
Ity dia hazakazaka kart kart loharano malalaka sy misokatra ho an'ny Gnu / Linux, Windows ary MacOS. Ny lalao mpilalao tokana dia azo lalaovina ho Time Attack sy mode multiplayer miaraka amin'ireo mpilalao eo an-toerana sy an-tserasera amin'ny alàlan'ny LAN na Internet. Manohana mpilalao 16 hatramin'ny multiplayer amin'ny Internet.
Sonic Robo Blast 2 Kart dia fanovana ny kaody loharano an'ny Version 2.1 nataon'i Kart Krew. Miorina amin'ny maody Mario Kart SRB2 Riders 'izy io tamin'ny voalohany.. Ity dia lalao fifaninanana kart miaraka amin'ny endri-tsoratra, entana ary sarintany avy amin'ny Sonic sy SEGA.
1 Ampidiro Sonic Robo Blast 2 Kart amin'ny Ubuntu
2 Topi-maso vetivety amin'ny lalao
Ampidiro Sonic Robo Blast 2 Kart amin'ny Ubuntu
Ny lalao hazakazaka Sonic Robo Blast 2 Kart dia azo ampiasaina ho amboara flatpak ho an'ny Ubuntu. Noho izany dia tsy maintsy avelantsika hampiasa an'ity teknolojia ity amin'ny rafitray aloha. Raha mampiasa Ubuntu 20.04 ianao dia afaka mijery The Guide fa nisy mpiara-miasa iray nanoratra momba izany tao amin'ity bilaogy ity taloha kelin'izay.
Raha vantany vao azontsika atao ny mametraka fonosana flatpak ao amin'ny Ubuntu 20.04, dia tsy mila manokatra terminal fotsiny isika (Ctrl + Alt + T) ary mihazakazaha manaraka ny baiko fametrahana lalao Sonic Robo Blast 2 Kart:
Ity baiko ity dia hametraka ny kinova farany an'ny lalao hazakazaka Sonic Robo Blast 2 Kart amin'ny Ubuntu. Io dia mety ho tantano ity lalao hazakazaka kart ity Amin'ny alàlan'ny mpandefa izay ho hitanao ao amin'ny rafitra, na amin'ny fampiharana amin'ny terminal (Ctrl + Alt + T) ny baiko:
Topi-maso vetivety amin'ny lalao
Ity lalao ity dia ny lalao hazakazaka kart mahazatra. Tafiditra ao anatin'izany ny fahafaha-mivezivezy, entana hanampiana na hanakanana ny mpilalao ary zavatra maro hafa mifandraika amin'ilay karazana. Na izany aza, ny fanaraha-maso sy ny fizika dia tsy mitovy amin'ny lalao kart hafa, miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fiakarana sy ny fahaizan'ny mpilalao tsirairay. Ny SRB2Kart dia misy endri-tsoratra 5 misy amin'ny lalao fototra, ary koa 30+ miaraka amin'ny add-on bonuschars.kart azo isafidianana.
SRB2Kart manolotra mekanika sy teknika sasantsasany, ao anatin'izany ny Tide Slip, Drop Dash, ary ny fahaizana mitsambikina mihoatra ny rano hatramin'ny indroa rehefa manana momentum ampy ianao. Ary koa, ireo zavatra azo avela ao aorian'ny mpilalao dia mihetsika miadana kokoa noho ny raha natsipin'ny mpilalao izy ireo, ary ny entana sasany (akondro na toeram-pitrandrahana) azo sintomina ao ambadiky ny mpilalao ho fitaovana fiarovana.
Ny lalao dia manolotra fomba fanandramana fotoana, izay hifaninananan'ny mpilalao amin'ny matoatoa ny mpiasa ary hahazo medaly hamita taranja amin'ny fotoana sasany. Medaly volafotsy no omena noho ny fandresena ny fotoana haingana indrindra amin'ny fitsidihana ary medaly volamena no omena noho ny fikapohana ny asan'ny mpiasa. Ny fahazoana medaly sasantsasany na ny hazakazaka maromaro dia hamaha atiny fanampiny, ao anatin'izany ny kaopy fanampiny sy ny hafainganam-pandeha mafy mihazakazaka.
Ny iray amin'ireo singa mampiavaka ny SRB2Kart dia ny maody marobe. Ao amin'ny Ireo lalao ireo dia azo lalaovina amin'ny alàlan'ny lalao an-toerana miaraka amina mpilalao efatra. Ho fanampin'izany, afaka milalao an-tserasera amin'ny alàlan'ny LAN na Internet isika miaraka amin'ny fanohanana mpilalao 16. Ny maody efijery Split dia mahazaka maody an-tserasera sy an-tserasera, miaraka amin'ny mpilalao efatra isaky ny mpanjifa. Raha mila plugins sasany ny mpizara an-tserasera dia hampidina sy hampakatra azy ireo ny lalao alohan'ny hanaovany fangatahana hiditra.
Para esory amin'ny Ubuntu ity lalao ity, tsy mila manokatra terminal fotsiny isika (Ctrl + Alt + T) ary ao no soraty ny baiko:
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny lalao dia afaka mandray ny mpampiasa jereo ny tranokalan'ny tetikasa na ny azy Wiki.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Sonic Robo Blast 2, lalao hazakazaka kart misy lohahevitra Sonic
Tonga ny Linux 5.12-rc4 ary toa mbola eo amin'ny lala-mahitsy ny zava-drehetra
Ny KDE Applications 21.08 dia efa eo an-dalam-pandrosoana. Vaovao sy fanovana hafa nomanin'ilay tetikasa